Qalabka Your Ma dhac Waxaad Blind, La dagaallama Back! - Rule News
Qalabka Your Ma dhac Waxaad Blind, La dagaallama Back!
Waxay halkaas fadhiisan maalintii oo dhan raadinaya aan waxba galabsan, sida haddii aan waxba ka mid ah noocyada kala socda. Weliba marka aad maba raadineyno, iyo xitaa marka aad, Qalabka aad la dhacayo aad indha la '. Waxay yihiin oo kaliya in ay u qabanayaan hab u adag tahay in la ogaado, laakiin qalad ma, dhammaan qalabka aad eed. Laga soo bilaabo qaboojiyaha in microwave ka, wax kasta oo dhaxyada shidan ee waa lacag bilking ka xisaabtaada bangiga via biilka korontada aad.
Laakiin hogs tamarta kuwaas oo ay qabanayaan ka badan ilaa socda biilka korontada aad. Waxa ay si wadajir ah u samayn badan oo dhib in meeraha. A yar oo ka mid ah qashinka tamarta ee gurigaaga laga yaabaa in aan loo kala badan in aad si. Laakiin tarma qashinka by tobanaan malaayiin, oo waxay ku yeelan karaan saamayn culus ee gobolka a siiyo.
In 2012, California xiran barnaamij laba sano ah in lagu bedelaa qalabka hawlqabad la'aan, inta badan kululeeyayaasha biyaha iyo nidaamka qaboojinta. Qiyaastii 178,000 qoysaska ka qayb. Barnaamijyada noocan oo kale ah waxaa uun bilowga. Ugu dambayntii, waxa hoos si shakhsiyaadka hor marinta tamarta marka ay timaado qalabka gadashada.
Macaamiisha ayaa guud ahaan gasha lacag. Is biilka gacanta loo wajihi karo saddex jiho:
Hel qiimo badan oo tartan loogu utilities
La soo iibiyo qalabka tamarta-ool ah
Live nololeed cagaar
Aynu eegno dhow at doorasho kasta:
Hel Price a More tartanka for Utilities
yaab, dad badan oo weli ma ogsoona in marka ay timaado bixiyayaasha utility, ay soo iibsan karaan agagaarka. Haddii aad ku nooshahay Texas, Illinois, New Jersey, ama Pennsylvania, aadan ku xaddidan yihiin hal bixiye. Waxaad ku bixin tamar saacad kilowatt ah (kWh).
Waxaa jirta fursad wanaagsan in uu jiro qof bixiya qiimaha xitaa ka fiican tahay waxa aad hadda qaadan. Dabcan, qiimaha ma aha waxa kaliya si ay u eegaan. Laakiin waa mid aad u weyn. Riix halkan Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bixiyeyaasha kala duwan iyo qorshayaasha tamarta ee gobolka.
Qalabka Iibso Energy-hufan
Qaboojiye, dhaqa, iyo qalajiya waa weyn, musharax cad u hagaajinta tayada shaqo ah. Qof walba waa ogyahay inta ay le'eg tahay awooda mashiinada kuwa dhiba. Si kastaba ha ahaatee, ka dambiilayaasha dhabta ah waxaa laga yaabaa in ay qalabka yaryar oo dagan u tago maalin walba dareemo. Forbes waxaas in la yidhaahdo oo ku saabsan arrinta:
Muddooyinka sawir Digital way yar yar yihiin, sidaas darteed waa adag tahay in lagu fekero oo ka mid ah sida hogs tamarta. Laakiin haddii laga xoreeyo kasta. reerka ayaa mid ka mid ah mab, kuwaas oo socda saacad, ku qaadan lahaa shan Quwadda dhammaantood waxay u ordaan, ayaa sheegay in Electric Power Machadka Cilmi-baarista ee (EPRI), cilmi-baarista iyo horumarinta doon koronto-diiradda ah.
piece Tani waxay sidoo kale u dhaco on tilmaamaynaa qodobada soo vampires tamarta sida madbacadaha iyo ku hadla. Waxa ay sidaas u yeedhay, maxaa yeelay, waxay ku kor jaqaan tamarta xitaa marka aan la on. Mobile saxan phone iyo adapters laptop sidoo kale xaq u, sida ay noqonayaan tamarta xataa marka waxba shidan iyaga la soo galo. line hoose: qalabka ma tahay mid aad u yar oo tixgelin tamarta
Live-nololeedka ah cagaar
Ugu dambeyntii, waxaan soo meeshii noocan ah mar walba articles aakhirka. Hadday tahay tamarta ama dhaqaalaha, Xalka kama dambaysta ah waa in aan u baahanahay inaan badalo qaab nololeed ku raaxaysan waarta isbedel.
In aad si dhab ah ma in uu ka qaato 30 Roob daqiiqadii heerkulka ugu kulul ee aad istaagi kara. Ma aha in aad si aad u maydho shay oo dhar ah ka dib markii uu xirnaa hal. Kuwani Talooyin baado tamarta ka xoreeyo dalka ka. Dowladda waa meel wanaagsan oo si aad u bilowdo haysataa sidii aad samayn karto si aad qayb.
Waxaan dhamaanteen leenahay qayb ka mid ah inuu ka ciyaaro. isticmaalka tamarta Your ma aha adag arrin gaar ah oo u dhexeeya adiga iyo guutadaada oo awood u. Waa arrin bulsho, sida tamarta waa kooban a, khayraadka la wadaago. Si aan maalin maalmaha ka mid ogaado sida aad u heli tamarta uuga soo baxay arrin mugdi ah. Laakiin ilaa markaas, waxaan u leeyihiin in ay u maareeyaan khayraadka ee naga qubo. Waa in qof kasta oo inaga mid ah si ay u maareeyaan khayraadka daryeelka kuwa.
← Waa kuwee laptop waa in aanu ka iibsan for our ilmaha? Sidee gumeysato Mars →